Nkwurịta Okwu na Nzipụta | Martech Zone
Wenezde, August 22, 2012 Thursday, June 18, 2015 Douglas Karr
Anyị na-eji GotoMeinging ihe dị ka ụbọchị ọ bụla na-arụ ọrụ iji gwa ndị ahịa anyị okwu. Ọ dị mma ịhụ otu n'ime ndị ahịa anyị na ndị nkwado ha, Mindjet, na vidio GotoMeeting! Vidio ahụ na-ekwu maka itinye aka na ya. Ma ị na-emebe a uche obi ma obu itule atumatu oru ngo… visibiliti bu isi. Maapụ ọgụgụ isi na-ahụ echiche, usoro na njikọ iji mee ka ọ dị mfe nghọta.
N'ezie, Gotomeeting na-eme otu ihe ahụ na ikike ugbu a iji na-ekwupụta okwu, anya (gụnyere vidiyo kamera n'ezie), yana site na itinye ndị mmadụ si n'ofe ụwa ma ọ bụ gafee ụlọ ọrụ n'otu ụlọ ahụ. Ezie na ọ bụ a azụmahịa advertisition, ozi ezi enyi m na otu Jascha Kaykas-Wolff eweta, dị oké mkpa.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịnụkwu ihe banyere Jascha - gbaa mbọ gee ntị na ajụjụ ọnụ anyị:
Gee ntị na Ajụjụ ọnụ anyị na Jascha!
Tags: nnwetaJascha Kaykas-WolffMindjetmap uche
Aug 27, 2012 na 12:28 PM
Daalụ nke ukwuu, Doug, maka ịkesa vidiyo vidiyo #MeetingIsBelieving anyị na Jascha! E nwere ọtụtụ ihe na-abịa na-egosi Jascha na MindJet 🙂 Olileanya na ị na-eme nke ọma!
Aug 27, 2012 na 3:58 PM
Bet nzọ, @justinlevy: disqus! Nnukwu ngwaahịa na vidiyo emeela nke ọma. O chetaara m na m kwesịrị ọgbaghara na GotoMeinging na iPad m!